CAJIIB :Haweenaydii Ugu Culayska Badnayd Caalamka oo Geeriyootay (Sawiro) – Radio Daljir
CAJIIB :Haweenaydii Ugu Culayska Badnayd Caalamka oo Geeriyootay (Sawiro)
Seteembar 27, 2017 9:28 b 0
Waxaa Geeriyootay Eman Axmed Cabdul Catti oo u dhalatay dalka Masar ,waxayna ahayd haweenaydi ugu culayska badnayd caalamka .
Eman Geerideeda ayaa timid isbuucyo kadib, markii ay u dabaal degtay 37-guuradii ka soo wareegtay Dhalashadeeda,taas oo dad badan u hambalyeeyen intaysan xijaaban.
Waxay mar ahaan jirtey Haweenka ugu miisaanka culus Caalamka, waxaa bishii May 4-dii la dhigay Isbitaalka Burjeel, si looga daaweeyo Cayilka xad-dhaafka ee jirkeeda.
Haweenaydan ayaa la sheegay inaysan waxba ku cuni jirin gacmaheeda culayska saaran dartiis ,taas oo cajiib ku noqotay Bulsho badan
Eman Axmed Cabdul ayaa lagu mashquulsana sidii loo dawayn lahaa bilooyin baddan ,waxaana Rajo gashay qoyskeeda ,kadib marki la arkay xooga inuu hoos u dhacay culayskii saarna gacmahana kor ay usoo qaaday.
Gabadhan Xijaabtay Salaasadii ayaa Dhakhaatiirta Isbitaalka waxay sheegeen inaysan nolosheeda khatar ku jirin, balse wax kasta waxay isbedeleen, kadib, markii Salaasadii ay geeriyootay.
Dhakhatirta daweynaysay Eman ayaa sheegay in wadnaheeda uu shaqadii gabay taas oo keentay inay Geeriyooto,waxayna shegeen inay dadaal dheraad ah ku bixiyeen samatabixinta Eman.
Marxuumadda ayaa lagu sheegay Culayskeeda inuu ahaa 500kg ,Marxuumadda ayaa lagu celin doona Dalka Masar gaar ahaan Magaaladda ay ku dhalatay ee Eleskandariya , halkaas oo Aas loogu samayn doono.